Zvemagetsi Fekitori | China Electronics Vagadziri uye Vatengesi
Mutengo wakanaka 99.95% Lithium Hexafluorophosphate powder CAS 21324-40-3
LiPF6 kristaro chena kana hupfu, inosungunuka mumvura uye inogadzikana mune zvisikwa zvinogadzirwa senge methanol, ethanol uye carbonate ine nzvimbo inonyungudika ye200 ℃ uye huwandu hwehukama hwe1.50g / cm3. Lithium Hexafluorophosphate chinhu chakakosha cheiyo electrolyte, kuverenga ingangoita 43% yemutengo wakazara weiyo electrolyte. Zvichienzaniswa nema electrolyte akadai seLiBF4, LiAsF6 uye LiClO4, lithium hexafluorophosphate ine zvazvakanakira mukunyungudika, kuitisa, kuchengetedzeka uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza muma organic solvents, uye parizvino ndiyo inonyanya kushandiswa lithiamu munyu.
Yakachena kuchena 99% Fluorinated Graphite CAS 11113-63-6 Fluorographite
Fluorographite inoshandiswa sekathodhi zvinhu zve lithiamu-fluorocarbon mabhatiri, pamutero wekubuda weC / 10, inogona kuiswa musimba-mhando, simba-mhando uye yakakwira kubuda rate-mhando mabhatiri ekutanga.
Iyo yekuburitsa chikuva chesimba-mhando fluorographite yakaenzana kana yakakura kupfuura 2.5V, yakatarwa kugona kwesimba-mhando fluorographite inopfuura 800mAh / g uye simba rayo chairo rinopfuura 2000Wh / kg, iri mhando yekathode zvinhu zvine yakanakisa. kuita mu lithiamu Primary Bhatiri.
Iyo yekuburitsa chikuva chesimba-mhando fluorographite yakaenzana kana yakakura kupfuura 2.8V, yakatarwa kugona kwesimba-mhando fluorographite inopfuura 700mAh / g uye simba rayo chairo rinopfuura 1900Wh / kg.
Maindasitiri / Magetsi giredhi TMAH 25% Tetramethylammonium Hydroxide cas 75-59-2
Chemical Zita: Tetramethylammonium Hydroxide (TMAH)
Rudzi: 25% TMAH (mhinduro); 99% TMAH (upfu)
Fluorographene yakakosha yakabva graphene. Inofananidzwa ne graphene, fluorographene yakachengetedza chimiro chemwenje che graphene kunyangwe maatomu ecarbon aive akaomeswa kubva pa sp2 kusvika pa sp3.
Nekuda kweizvozvo, fluorographene haina chete yakakura chaiyo nzvimbo, panguva imwechete nekuda kwekuunzwa kwemaatomu e fluorine, simba repamusoro re graphene rakadzikiswa zvakanyanya, chivakwa che hydrophobic uye oleophobic chakasimudzirwa zvakanyanya, nepo kutsiga kwemafuta, kemikari kudzikama uye kurwisa kurwisa zvainyanya kuvandudzwa. Nekuda kwenzvimbo dzayo yakasarudzika, fluorographene inogona kushandiswa zvakanyanya muminda yeanopisa-kupfeka lubrication, yakanyanya tembiricha ngura inodzivirira kupfeka, panguva imwechete, nekuda kweyakafara bandgap, fluorographene ine mikana yekushandisa tarisiro mune nano-zvigadzirwa zvemagetsi, mafotoelectronic michina , zvishandiso zvemagetsi uye mimwe minda.
Mutengo wakanaka 99.9% Lithium Tetrafluoroborate LiBF4 CAS 14283-07-9
Lithium Tetrafluoroborate (LiBF4) iri poda chena kana yero, inonyungudika nyore mumvura, ine solubility yakanaka mumakemikari eacarbonate uye makemikari ether, ine nzvimbo inonyungudika ye 293-300 ° C, uye huwandu hwehukama hwe0.852 g / cm3. Lithium tetrafluoroborate ine yakanaka makemikari kugadzikana
uye kupisa kwemafuta, uye inonyanya kushandiswa sechiwedzera muLiPF6 yakavakirwa electrolyte system yekuvandudza hupenyu hwekutenderera uye kugadzirisa mashandiro e lithiamu ion mabhatiri.
Mushure mekuwedzera LiBF4 kune iyo electrolyte, iyo inoshanda tembiricha renji yeiyo lithium ion bhatiri inogona kuwedzerwa, uye yakakwira uye yakadzika tembiricha kubuda kuita kwebhatiri kunogona kuvandudzwa.
Mutengo wakanaka 99% Fluorographite CAS 11113-63-6
Fluorocarbon zvinhu imhando yezvinhu zvinoshanda fluorocarbon zvinhu zvine zvakakosha zvivakwa.
Iwo ave achishandiswa zvakanyanya mukuoma kwakasimba, ngura inodzivirira uye antifouling kupfeka, murazvo unodzora zvinhu, moderator yenyukireya reactor uye Li-CFx mabhatiri nekuda kwekukodzera kwesimba rakanyanya pasi pevhu, rakanakisa chemakemikari kugadzikana, kwakanyanya kupisa kutsungirira uye super dzidziso chaiyo kugona. .
Mutengo wakanaka 99% Perfluorooctane CAS 307-34-6
Perfluorooctane (C8F18) ine nzvimbo inonyungudika ye -25 ℃ uye nzvimbo yekubikira ye103 ℃. Iyo haina-inopisa, isina-chepfu, yakanyanyisa makemikari uye isina kuchena. Perfluorooctane haina insoluble mumvura, ethanol, acetic acid uye formaldehyde, asi inogona kuputswa mu ethyl ether, acetone, dichloromethane, chloroform uye fluorochloroalkane. Perfluorooctane ine yakaderera pevhu makakatanwa, yakakwira dielectric simba, yakanakisa kupisa kuramba uye kupisa kwekuora pamusoro pe800 ℃. Perfluorooctane inogona kuputsa huwandu hwakawanda hweoksijeni uye kabhoni dhayokisaidhi, uye inogona kushandiswa nemamwe mafluorocarbon macomputer seropa rekugadzira uye mu vitro nhengo yekuchengetedza mvura.
Mutengo wakanaka Perfluorodecalin CAS 306-94-5
Perfluorodecalin (C10F18), inozivikanwawo se octadecfluorodecalin kana perfluorodecalin (decalin), irwo rudzi rwe perfluorocarbon liquid ine nzvimbo inonyungudika ye -10 ° C nenzvimbo yekubikira ye140 ° C. Iyo isina ruvara uye yakajeka mvura.
Iyo colloidal ultramicroemulsion inoumbwa ne perfluoronaphthalane uye mamwe ma perfluorocompound, seropa rekugadzira, rine kugona kwakanaka kwe oxygen. Pasi pehumwe huturu uye kumanikidzwa kudzvanywa kweoksijeni, okisijeni yayo inogadzikana yakapetwa ka20 iyo yemvura uye ka2 zvakapetwa kupfuura iro reropa.